အသိပညာတျောလှနျရေး၊ ကိုယျ့ကိုယျ ကိုယျနား လညျရေးနှငျ့ တနျပွနျယဉျကြေးမှုဆိုငျရာ ဝေါဟာရမြား – Federal Journal
အသိပညာတျောလှနျရေး၊ ကိုယျ့ကိုယျ ကိုယျနား လညျရေးနှငျ့ တနျပွနျယဉျကြေးမှုဆိုငျရာ ဝေါဟာရမြား
အသိပညာတျောလှနျရေး၊ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ နားလညျရေးနှငျ့ တနျပွနျ ယဉျကြေးမှု ဆိုငျရာဝေါဟာရမြား
အသိပညာတျောလှနျရေး၊ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျနားလညျရေးနှငျ့တနျပွနျယဉျကြေးမှုဆိုငျရာ ဝေါဟာရမြား
Angry young man – ဒီဝေါဟာရကို ပထမဆုံးသုံးစှဲခဲ့တဲ့သူက လကျစလီပေါ (Leslie Paul) ဖွဈပွီး သူ့ရဲ့ ၁၉၅၁ ခုနှဈ ကိုယျတိုငျရေး အတ်ထုပ်ပတ်တိမှာ ဖျောပွခဲ့တယျ။ ဒီစကားလုံးဟာ ဗွိတိနျရဲ့ စာပမွေငျကှငျးထဲမှာ ၁၉၅၀ ပွညျ့နှဈမြား ကာလတှမှော မကွာခဏဆိုသလို တှလေ့ာ ရတယျ။ ၁၉၆၀ ပွညျ့နှဈကုနျခါနီးမှာတော့ ကလီရှေးဖွဈနတေဲ့ အသုံးတဈခုအဖွဈတောငျမှ မွငျလာကွပွီ။ ဒီစကားလုံး ပျေါပွူလာဖွဈ ပွီး ယုံကွညျကွညျသုံးစှဲလာတာအတှကျ တာဝနျရှိ သူကတော့ ဂြှနျအော့ဈဘှနျး (John Osborne)ရဲ့ ၁၉၅၇ ခုနှဈထုတျ ပွဇာတျ Look Back in Anger ပဲ။ ဒီပွဇာတျမှာ လမျးပြောကျပွီး သူတို့ရဲ့ ခတျေကွီးကို မကမြေနပျ၊ မရောငျ့မရဲဖွဈနတေဲ့ လူငယျမြိုးဆကျတဈဆကျကို ဖျောညှနျးထားတယျ။ ဒီမြိုးဆကျဟာ တညျရှိနတေဲ့ အုတျမွဈတှေ၊ ပငျးမရစေီးထဲ ဝငျရောကျနရောကနြတေဲ့အရာတှကေို မနှဈခွိုကျကွဘူး။ ပွငျးပွငျးထနျထနျ ဆနျ့ကငျြကွတယျ။ သူတို့ လူ့အဖှဲ့အစညျးရဲ့ လူမှုရေးနဲ့ နိုငျငံရေးဆိုငျရာ သဘောထားတှကေို ဆနျ့ကငျြ တုံ့ပွနျကွတယျ။ ဟဈပိုခရစေီတှေ၊ ရှကျကွမျး ရကွေိုလို ဖွဈနတေဲ့ အနုပညာတှကေို မနှဈမွို့တော့ ဘူး။ အထူးသဖွငျ့ သာမနျတနျဖိုးစံတှကေို စံပုံစံတဈရပျ လို အသစှေဲမှတျယူပွီး အဲဒီတနျဖိုးစံတှအေတိုငျး ရေး သားထားတဲ့ အရေးအသားတှကေို ဟဈပိုခရကျတှရေဲ့ အရေးအသားတှေ၊ သာမနျ ရှကျကွမျးရကွေို အရေး အသားတှအေဖွဈ သတျမှတျလာကွတယျ။ တဈနညျး အားဖွငျ့ ဘူဇှာကငျြ့ဝတျတှအေဖွဈ ခံယူပွီး ပွငျးပွငျး ထနျထနျဆနျ့ကငျြကွတာ ဖွဈတယျ။ အော့ဈဘှနျးရဲ့ ပွဇာတျထဲက ဂငျြပျေါတာဟာ ဟီးရိုး ဆနျ့ကငျြသူ (anti-hero) ပဲ။ ဒေါသကွီးနတေဲ့ လူငယျလေးမြား ဆိုတာကို ကိုယျစားပွုနိုငျတဲ့ ဇာတျကောငျတဈ ကောငျးပဲ။ အော့ဈဘှနျးနဲ့ သူ့လကျရာတှကေနစေပွီး သူနဲ့ခတျေပွိုငျ မြိုးဆကျလူငယျတှကေို ကူးစကျသှားတဲ့ ဒေါသကွီးနတေဲ့ လူငယျလေးမြားဆိုတာ ၁၉၅၀ ပွညျ့နှဈက အနုပညာလကျရာ အမြားစုကို ကိုယျစားပွု ဖျောပွတဲ့ စကားလုံးတောငျမှ ဖွဈလာတယျ။ နောကျ ပိုငျး ဒီဝေါဟာရဟာ ဘိ(တျ)မြိုးဆကျရဲ့ အတှေးအချေါ တှထေဲမှာလညျး ကိနျးအောငျးသှားတယျ။
ကွညျ့ – Beat Generation
Bad faith – ကိုယျ့ကိုယျကိုယျမှားယှငျးစှာ နားလညျမှု။ ယနျးပျေါဆာ့တျရဲ့ ဖီနိုမနျနိုလိုဂြီဆိုငျရာ အစောပိုငျး အရေးအသားတှေ ထဲမှာ အဓိကကတြဲ့ အကွောငျးအရာအဖွဈ တှရေ့မယျ။ ပွငျသဈလို Mauvaise foi ဝါ ကိုယျ့ရဲ့ ငါဖွဈမှုကို မှားယှငျးစှာ နားလညျမှုကို ဆာ့တျရဲ့ Being and Nothingness မှာ ပထမဆုံးဖျောပွထားတယျ။ ပငျဂှငျးဝဖေနျရေး သီအိုရီအဘိဓာနျမှာ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ မှားယှငျးစှာ နားလညျမှုဆိုတာ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ လှညျ့ဖြားခွငျးနဲ့ ကိုယျ့ငါ့ဖွဈမှုရဲ့ တကယျ့ အရငျးအမွဈကို မသိနိုငျခွငျး (inauthenticity) ပုံသဏ်ဌာနျတဈခုဖွဈပွီး လူသားရဲ့ လှတျလပျမှုကို ငွငျးပယျခွငျး (aform of self-deception and inauthenticity andadenial of human free-dom) လို့ ဖှငျ့ဆိုတယျ။ ဒီအယူအဆဟာ ဟိုကျဒေးဂါးနဲ့ ဟူးဆယျရဲ့ သိမှုနဲ့ ဖွဈရှိမှု (being) အပျေါ အခွခေံတဲ့ အသိတှကေို တုံ့ပွနျရငျး ထှကျလာတဲ့ အယူအဆပဲ။ ဆာ့တျအတှကျက လိမျညာခွငျးနဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ မှားယှငျးစှာသိနားလညျခွငျး နှဈခုကွားက အရေးကွီး တဲ့ ကှဲပွားခွားနားခကျြကို ခှဲခွားပေးခဲ့တယျ။ လိမျညာ သူဆိုတာက ရှငျးတယျ။ သူ့မှာ အမှနျတရားကို ပိုငျဆိုငျ ထားသေးတယျ။ ဒါပမေယျ့ တခွားသူကို ပွောတဲ့ အခါမှာသာလြှငျ သူသိထားတဲ့ အမှနျတရားကို ထုတျ ဖျောပွောဆိုဖို့ရာ ငွငျးဆနျလိုကျတာ။ ပွီးတော့မှ ထပျပွီး သူ့ရဲ့ အမှနျရယျလို့ မွငျထားတဲ့ ကိုယျပိုငျအမွငျ တဈခုကို တိတျတိတျကလေး ငွငျးပယျလိုကျပွနျတာ။ လိမျညာခွငျးမှာ လိမျညာသူရဲ့ သိမှုဟာနှဈခုတှဲပုံစံရှိ နတော။ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျမှားယှငျးစှာ သိနားလညျ ထားသူကတော့ သူ့ကိုယျတိုငျကနတေောငျမှာ အမှနျ တရားကို မမွငျနိုငျလောကျအောငျ မကျြနှာဖုံးတဈခုကို စှပျထားတာ။ သူကိုယျသူ ဘာလိုခငျြမှနျးလဲ မှနျမှနျ ကနျကနျ သိနားမလညျဘူး။ ကိုယျ့ရဲ့ အရငျးခံအကဆြုံး ငါဖွဈမှုကို မပိုငျဆိုငျနိုငျတော့ကာ သူသိသမြှ၊ လုပျသမြှ ဟာ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ လှညျ့ဖြားနခွေငျးကနေ ထှကျ လာတဲ့ အကြိုးဆကျတှကွေီးပဲ။ လိမျညာသူလို အမှနျ ကို သိနားလညျတာ၊ ပွီးတော့မှ ပွနျငွငျးတာမြိုး မဟုတျတော့ဘူး။ သိရဲ့သိမှုမှာကိုယျက သူပြောကျဆုံး နပွေီး ကိုယျ့ကိုယျကိုယျလှညျ့ဖြားထားခွငျး ပုံစံတဈမြိုး သာလြှငျ ကနျြတော့တယျ။
Munfh – Autheticity
Sartre, Jean-Paul (1943a), Being and Nothingness .
Beat Movement – ဘိ(တျ) လှုပျရှားမှုဆိုတာ ကဗြာ နဲ့ စာပတေဈခုတညျး မဟုတျဘူး။ ယဉျကြေးမှု တဈခုအနနေဲ့ ပါ အမရေိကနျ လူ့အဖှဲ့အစညျးရဲ့ နစေ့ဉျ ဘဝထဲ ပြံ့နှံ့ စိမျ့ဝငျခဲ့တဲ့ အတှေးအချေါ၊ ဘဝနထေိုငျမှု ပုံစံတှပေဲ။ ဘိ(တျ)တှကေ သာမနျကွညျ့လိုကျရငျ စဈပွီး ခတျေ စဈအေးတိုကျပှဲအတှငျး နဝတေိမျတောငျ ဖွဈ နတေဲ့ အမရေိကနျ လူ့အဖှဲ့ အစညျးရဲ့ အခွအေနေ ကို မကမြေနပျဖွဈနတောလို့ တှေးနိုငျတယျ။ ဒါပမေယျ့ တကယျတမျးလလေ့ာကွညျ့ရငျ ဘိ(တျ) တှဟော သူတို့ရဲ့ ကနြေပျဖှယျရာမကောငျးတဲ့ အခွအေနေ တဈရပျကို အနုပညာအရ ဘယျလို တုံ့ပွနျသလဲဆိုတာ တငျ မကဘူး၊ သူတို့ရဲ့ ဘဝနထေိုငျမှု ပုံစံတဈခု လုံးနဲ့ပါ တှနျးတိုကျ ရှလြေ့ားဖို့ ကွိုးစားတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဘိ(တျ)တှအေတှကျ ကဗြာ၊ ဝတ်ထုဆိုတာ ကဗြာ၊ ဝတ်ထု သကျသကျ ဖွဈမနဘေူး။ ဘိ(တျ)တှအေတှကျ သူတို့ရဲ့ အနုပညာဆိုတာ သူတို့ရဲ့ဘဝပဲ။ ဘိ(တျ)တှကေ နစေ့ဉျ ဘဝနဲ့ကငျးကှာပွီး ဘယျတော့မှ အနုပညာကို မတှေးချေါဘူး။ သူတို့က သူတို့ လကျရှိ ပစ်စုပ်ပနျဘဝ အတှငျး နစေ့ဉျ မွငျတှနေ့ရေတဲ့ အရာတှေ၊ အဲဒီနစေ့ဉျ မွငျတှနေ့ရေတဲ့ အရာတှအေပျေါ လှမျးမိုးခြုပျကိုငျ ထားတဲ့ ယဉျကြေးမှု၊ စာပေ စတာတှကေို တှနျးကနျဖို့ ကွိုးစားတာပဲ။ သူ့တို့ရဲ့ လကျရှိ လူ့အဖှဲ့အစညျး အတှကျ အရေးကွီးဆုံးက ဘာဖွဈမလဲဆိုတာပဲတှေး တယျ။ ဘိ(တျ)တှကေ လှမျးမိုးကွီးစိုးဆဲ ယဉျကြေးမှု တနျဖိုးစံတှကေနေ သှဖေယျဖို့၊ ဆနျ့ကငျြဖို့ လုပျကွတဲ့ နရောမှာတော့ ပို့ဈမျောဒနျဝါဒီတှရေဲ့ ရှတေ့ျောပွေးပဲ။ ဘိ(တျ)တှကေ သူတို့ရဲ့ ဘဝတဈခုလုံးစာနဲ့တောငျမှ လှမျးမိုးကွီးစိုးဆဲ တနျဖိုးစံကနေ ကငျးလှတျမယျ့ သူတို့ ရဲ့ ကိုယျပိုငျတနျဖိုးစံ၊ ကိုယျပိုငျဘဝနထေိုငျပုံတှကေို ရှာဖှတော။ ဒါကွောငျ့ ဘိ(တျ)တှဟော ပငျမရစေီး ယဉျကြေးမှုတှကေနေ အမွဲသှဖေယျခဲ့ကွတယျ။ ဘိ(တျ)တှကေ ယဉျကြေးမှုအခှဲတှေ ဝါ သူတို့ဘာသာ သူတို့ ဖနျတီးတညျဆောကျထားတဲ့ ယဉျကြေးမှုပုံစံ (subculture) တှကေို ဖနျတီးတညျ ဆောကျနိုငျတယျ။ ဘိ(တျ) ယဉျကြေးမှု ဟနျ၊ ဘိ(တျ) စတိုငျတှဟော တဈခါတဈခါ ပငျမရစေီးထဲကိုတောငျမှ ရောယှကျ သှားတယျ။ ဘိ(တျ ) ယဉျကြေးမှုဟာ ဘီတဲလျ၊ ဘော့ ဒလနျတို့အထိတောငျမှ နယျနိမိတျ ရေးဆှဲထားတယျ။
Charters, Ann, 2001 .Beat Down to Your Soul: What was the Beat Generation¿. Penguin Books. Ann Charters, 1992; Introduction to The Portable Beat Readerm,
Counterculture – ၁၉၆၀ ပွညျ့နှဈမြားမှာ ဖှံ့ဖွိုး လာတဲ့ ဝေါဟာရတဈခုဖွဈတယျ။ လူငယျယဉျ ကြေးမှု၊ ကြောငျးသားတှရေဲ့ သီးသနျ့ ယဉျကြေးမှုခှဲနဲ့ အထူးသဖွငျ့ ဟဈပီယဉျကြေးမှုတှကေို နားလညျလာ အောငျလုပျတဲ့ အယူ အဆတဈရပျလညျးဖွဈတယျ။ တနျပွနျယဉျကြေးမှုဆိုတဲ့ ဒီဝေါဟာ သုံးစှဲပုံနှဈမြိုးရှိ တယျလို့ Frank Musgrove (1974) က သူ့ရဲ့ Ectasy and Holiness, Counter Culture and the Open Society မှာ ဖျောပွတယျ။ တဈခုက တနျပွနျ ယဉျကြေး မှုဟာ ပါဝါကို လှုပျရှားပွီး ရှလြေ့ားနတေဲ့ ပါဝါမြိုး အဖွဈ လုပျဆောငျတယျ။ ဆိုလိုတာ လှမျးမိုးကွီးစိုးဆဲ ယဉျကြေးမှုကို ဆနျ့ကငျြတဲ့ အတှေးအချေါ၊ ယုံကွညျ မှုနဲ့ တနျဖိုးစံတှကေို ယူဆောငျပေးတာ။ ဒုတိယ တဈခုကတော့ တနျပွနျယဉျကြေးမှုဆိုတာ ရုပျပိုငျး ဆိုငျရာထကျ စိတျပိုငျး ဆိုငျရာကို တနျဖိုးထားတာ၊ အရှကျအကွောကျနဲ့ ထိနျးခြုပျနခွေငျးထကျ လိငျပိုငျး ဆိုငျရာ ခံစားမှု၊ လောကီစညျးစိမျ ခံစားမှုကို ဦးစားပေး တယျ။ အာဂတိလိုကျစားမှုထကျ လကျခံပေး၊ သညျး ညဉျးခံပေး (tolerence) တယျ။
တနျပွနျယဉျကြေးမှုဆိုရငျ အဓိကအားဖွငျ့ ပငျမ ရစေီး လူ့အဖှဲ့အစညျးထဲ အဖွောငျ့အတိုငျးနဖေို့ထကျ ပငျမရစေီးကနေ ခှဲထှကျတဲ့ပွီး နထေိုငျတဲ့ အုပျစုတှကေို လညျး ရညျညှနျးတယျ။ တနျပွနျယဉျကြေးမှုဆိုတာ အသဈဖွဈပျေါလာတဲ့ လူမှုရေးအလအေ့ကငျြ့တှကေို ဆိုလိုတယျ။ တနျပွနျယဉျကြေးမှုလုပျတယျ ဆိုတာ ကလညျး လူမှုအလအေ့ကငျြ့ အသဈတှေ ဖွဈထှနျး လာအောငျကွိုးစားခွငျးပဲ။ မူးယဈဆေးသုံးတာ၊ လိငျ ကိစ်စလှတျလပျတာ၊ ပညာရေးကို ရှိပွီးသားပုံစံကနေ တိုကျရိုကျမခဉျြးကပျတာမြိုးတှပေဲ။ အဲဒီလို တနျပွနျ ယဉျကြေးမှုတှကေို အထောကျအပံ့ပေးတဲ့ အငျစတီ ကြူးရှငျတှကေ ကိုယျ့ဘာသာကိုယျ ဖှဲ့စညျးတညျ ထောငျ နထေိုငျတဲ့ လူမှုအသိုငျးအဝိုငျးတှေ၊ ပငျမရစေီး ကို ဆနျ့ကငျြတဲ့ သတငျးစာတှေ၊ မဂ်ဂဇငျးတှေ၊ လှတျ လပျတဲ့ ကြောငျးတှေ၊ မွအေောကျပှဲတျောတှေ (un-derground festivals) ကို ချေါတယျ။ ၁၉၇၀ ပွညျ့နှဈ မြားမှာ တနျပွနျယဉျကြေးမှု ပုံစံတှေ အားကောငျးပွီး နောကျပိုငျးတဖွညျးဖွညျး လြော့ကသြှားတယျဆိုပေ မယျ့ သူ့ရဲ့ အတှေးအချေါပိုငျးနဲ့ သင်ျကတေဆိုငျရာ တှကေတော့ ရှိနဆေဲပဲ ဖွဈတယျ။
Musgrove, Frank: Ecstasy and Holiness. Counter Culture and the Open Society. 1974. Roszak, Theodore: The Making ofaCounter Culture. 1968 (1971).
Critique – ဒီစကားလုံးဟာ အင်ျဂလိပျဘာသာ စကားထဲကို ၁၈ ရာစုအစောပိုငျးလောကျက ပွငျသဈ ဘာသာ စကားကနေ ရောကျရှိလာတဲ့ စကားလုံး ဖွဈတယျ။ ခရဈ ဘောဒဈကတော့ သူ့ရဲ့ အောကျစဖို့ဒျ စာပဝေေါဟာရ အဘိဓာနျမှာ ]စာပလေကျရာတဈခုကို နှိုငျးနှိုငျးခြိနျခြိနျ ခဉျြးကပျလလေ့ာမှုပုံစံ။ အမြားအားဖွငျ့ အကျဆေး ဒါမှမဟုတျ ရီဗွူးပုံစံမြိုးအတှကျ သုံးလရှေိ့ တဲ့စကားလုံး}လို့ ဖှငျ့ဆိုထားတယျ။ ဒီစကားလုံးဟာ အစောပိုငျးမှာ စာပလေကျရာတှကေို သရုပျဖျောတာ၊ စီရငျခကျြခတြာအတှကျ သုံးတယျ။ ဒါပမေယျ့ ၁၉ ရာစုလောကျမှာ ပွနျပွီး အဓိပ်ပာယျအသဈနဲ့ ပျေါလာ တယျ။ ၁၈ ရာစုကုနျခါနီးလောကျမှာ ဂြာမနျဒဿန ပညာရှငျ အီမနျနူရာယျကနျ့ရဲ့ အသုံးတှကွေောငျ့ သူ့ကို ဘာသာပွနျ ပွီး အင်ျဂလိပျဘာသာစကားထဲရောကျ လာတယျ။ ဒီပွနျရပေနျးစားလာတဲ့ Critique ဆိုတဲ့ အသုံးဟာ မွနျမာဘာသာစကားအနကျမှာ သုံးတဲ့ ဝဖေနျရေး Crticism ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ မတူတော့ဘူး။ ဒါကွောငျ့လညျး ခှဲပွီးသုံးတယျ။ Criticism က သူ ဝဖေနျမယျ့အရာဟာ ဘယျလို လညျပတျအလုပျလုပျ နသေလဲဆိုတဲ့ အလုပျလုပျပုံကို ရှငျးပွတယျ။ နောကျ စီရငျခကျြခတြာ၊ အဆိုးအပွဈရှာတာ စသဖွငျ့ သူ့ သမိုငျးကွောငျးနဲ့ သူလာတဲ့ ဝဖေနျရှုမွငျပုံ နညျးနာ အရပျရပျကို စုပေါငျးချေါတာ။ Critique ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရက သူရှငျးပွ ထုတျဖျောပွခငျြတဲ့ နှိုငျးနှိုငျး ခြိနျခြိနျခဉျြးကပျတဲ့အပိုငျးကို ဆိုလိုတယျ။ တဈနညျး အားဖွငျ့ စူးစမျးရှာဖှခွေငျးပဲ။ ဝဖေနျတယျလို့ ဆိုရငျ တောငျမှ သူပွောခငျြတဲ့ အဆိုတဈခုကို တငျပွတော့ မယျ့ ပုံစံမြိုးသာလြှငျဖွဈတယျ။ ဥပမာ ကနျ့ရဲ့ Critique of Pure Reason (1787) သုံးတဲ့ Critique ဆိုတာ အသိပညာပုံသဏ်ဌာနျအရငျးအမွဈကို ရှာဖှေ ခွငျးပုံစံနဲ့သုံးတယျ။ စူးစမျးရှာဖှခွေငျးဆိုတဲ့အနကျ ထှကျတယျ။ ပွီးတော့ သူက လလေ့ာစူးစမျးတဲ့နရော မှာလညျး ခငျြ့ခငျြ့ခြိနျခြိနျနဲ့ အကွောငျးအကြိုး ထုတျ ပွတယျ။ ဥပမာ ရုပျရှငျတဈခုရဲ့ လူမြိုးရေးဝါဒအကွောငျး စူးစမျးပွောဆိုတော့မယျဆိုရငျ (critique of the racism ofafilm) ဒီရုပျရှငျဟာ လူမြိုးရေးခှဲခွားတယျ ဆိုပွီး ရုတျခညျြးမပွောဘူး။ ဘာကွောငျ့ လူမြိုးရေး ခှဲခွားသလဲ၊ ဘယျလို အဓိပ်ပာယျမြိုးတှကေ လူမြိုးရေး ခှဲခွားသလို ဖွဈနသေလဲဆိုတာကို အကွောငျးနဲ့ အကြိုးနဲ့ ပွောတယျ။ မာ့ကျဈက သူ့ရဲ့ အရငျးကမျြး Capital ရဲ့ ခေါငျးစဉျကို A Crtitique of Political Economy လို့ ဆိုရငျ သူဆိုလိုခငျြတာက နိုငျငံရေး ဘောဂဗဒေရဲ့ အရငျးအမွဈဟာ အကနျ့အသတျတှေ ရှိနကွေောငျးကို ထုတျဖျောပွောဆိုဖို့ရာအတှကျ လလေ့ာစူးစမျးတာပဲ။ တဈဆကျတညျးမှာပဲ Critque ဆိုတာ အရငျးရှငျစနဈ အလုပျလုပျပုံကို ကောငျးကောငျး ရှငျးပွပေးနိုငျဖို့ရာ လလေ့ာစူးစမျးနခွေငျးဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ သုံးတယျ။ မာ့ကျဈရဲ့ အရေး အသားတှေ ထဲမှာတှရေ့တဲ့ Critiqueu က အိုငျဒီယိုလိုဂြီကို စစေ့ေ့ စပျစပျ စိတျဝငျတစားဖျောထုတျခွငျးဆိုတဲ့ အနကျမြိုး ရှိတယျ။ Critique ရဲ့ ရညျရှယျခကျြက လကျရာထဲက အိုငျဒီယိုလိုဂြီကို စူးစမျးဖျောထုတျခွငျးဆိုတဲ့ သဘော ပဲ။
အဒေါနိုး (Adorno)atranscendent critique နဲ့ an immanent critique ဆိုပွီး ခှဲခွားပွသေးတယျ။ A transcendent critique က သူ့ရဲ့ ကိုယျပိုငျစညျးမဉျြး နိယာမတှကေိုတညျပွီး၊ အဲဒီအရာကို အသုံးခပြွီး သီအိုရီတဈခုကို အပွငျကနေ ဝဖေနျတယျ။ An immanent critique ကတော့ အဲဒီ ဝဖေနျမယျ့ သီအိုရီ အတှငျးပိုငျးမှာဖွဈနတေဲ့ ပဋိပက်ခတှကေို ရှာဖှဖေျော ထုတျပွီး အဲဒီသီအိုရီရဲ့ ကိုယျပိုငျဝေါဟာရတှနေဲ့ သူ့ကို ပွနျဝဖေနျတယျ။
Death of the grand narratives – ရနျးဖရနျဆှာ လီယိုတာက သူ့ရဲ့ The Postmodern Condition (1979) စာအုပျမှာ ရေးသားထုတျ ဖျောထားတဲ့ အတှေး အချေါ တဈခုဖွဈတယျ။ ဒီလကျရာဟာ အဓိကအား ဖွငျ့ အသိပညာကို ဘယျလို ဖှဲ့စညျးတညျဆောကျ ထားသလဲ၊ ဘယျလို ထုတျလုပျလိုကျသလဲဆိုတဲ့ လမျး ကွောငျးကို အဓိက စိတျဝငျတစား ရှာဖှစေူးစမျးမှု တှနေဲ့ ပတျသတျတယျ။ လီယိုတာ က ဉာဏျအလငျး ပှငျ့ခတျေရဲ့ မျောဒနျဖွဈမှု (modernity) မှု အသိပညာ ဆိုတာ မဟာဇာတျပွောပုံတှထေဲမှာ တညျဆောကျခံ ထားရတယျလို့မွငျတယျ။ မဟာဇာတျပွောပုံတှေ ဆိုတာ သီးသနျ့ ရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျတဈခုဆီကို မူတညျပွီး အိုငျဒီယိုလိုဂြီအရ မောငျးနှငျနတေဲ့ စကား လုံးဖွဈတယျ။ တီးလို့ ( Telos ) လို့ချေါတဲ့ နောကျဆုံး အဆုံးသတျမှာ အမှနျတရားတဈခုကို ထုတျလုပျလိုကျ တဲ့ အမွငျ၊ ဝါ အခွခေံ အုတျမွဈတဈခုအပျေါ တညျ ဆောကျထားတဲ့ နိယာမအပျေါ အခွခေံပွီး တညျ ဆောကျထားတဲ့ ဇာတျပွောပုံစံမြိုးကို ချေါတယျ။ မျောဒနျဖွဈမှုဟာ အဲဒီလို တညျဆောကျထားတဲ့ မဟာ ဇာတျပွောပုံ (grand narratives) ထဲမှာ အသိပညာ ကို ထုတျလုပျနတေဲ့ ပုံစံမြိုးဖွဈတယျ။ အသိပညာ ဆိုတာ သနျ့စငျတဲ့ ရှာဖှတှေရှေိ့မှု မဟုတျဘူး။ ယုံကွညျလာအောငျ ပွုလုပျခံထားရတဲ့ အရာ၊ ယဉျကြေးမှုနဲ့ လူမှုရေးကနေ မောငျးနှငျနတေဲ့ အရာဖွဈပွီး သီးသနျ့ အိုငျဒီယိုလိုဂြီဆိုငျရာ အမွငျ တဈရပျကို ထုတျဖျောပွဖို့ရာအတှကျ လိုအငျဆန်ဒ တဈစုံတဈရာ အတှငျးက မောငျးနှငျနတေဲ့ အရာဖွဈ တယျ။ စဈမှနျတဲ့ အသိပညာဆိုတာ မဟာဇာတျ ပွောပုံထဲကနေ မောငျနှငျနတေဲ့ အိုငျဒီယိုလိုဂြီတှေ၊ လိုအငျဆန်ဒတှကေနေ အသိအမှတျပွုပေးခံထားရတဲ့ အရာကိုမှ စဈမှနျတဲ့ အသိပညာလို့ မှတျယူထားတဲ့ ပုံစံဖွဈတယျ။
နောကျထပျစကားလုံးတဈခုနဲ့ ပွောမယျဆိုရငျ မဟာဇာတျပွောပုံ ပစ်စုပ်ပနျကာလတရားအတှငျး တညျရှိပွီး လညျပတျနတေဲ့ ယုံကွညျမှုစနဈ (a circular system of belief) တဈခုပဲ။ ပစ်စုပ်ပနျကာလ တရားအတှငျးမှာ လကျခံထားပွီး လညျပတျနတေဲ့ ယုံ ကွညျမှုစနဈပဲ။ လီယိုတာက ဉာဏျအလငျးပှငျ့ ခတျေကနထှေကျပျေါလာတဲ့ မဟာ ဇာတျပွောပုံတှထေဲမှာ အလှမျးမိုး ဆုံး မဟာဇာတျပွောပုံနှဈခုမှာ တဈခုက မာ့ကျဈဝါဒဇာတျပွောပုံပဲ။ လူမှုရေးဆိုငျရာ ပွုပွငျပွောငျးလဲမှု တှကေ ထှကျလာတဲ့ ကြှနျပွုခွငျး၊ သူတဈထူးအောကျမှာ အလုပျလုပျရ တဲ့ ပုံစံကနေ လှတျမွောကျဖို့ရာ ကွိုးစားတဲ့ ဇာတျပွောပုံ။ ဒုယတိ တဈခုကတော့ ဟဂေယျ ဇာတျပွော ပုံ (The Hegelian narrative) တဈခုပဲ။ ဘာသာရေးကနေ ကငျး လှတျပွီး စဈမှနျတဲ့ အသိပညာကို ရှာဖှတေဲ့ ဇာတျပွောပုံတဈခုပဲ။ တခွားသော သီအိုရီ ပညာရှငျတှေ ရဲ့ ဇာတျပွောပုံတှေ လညျးရှိသေးတယျ အဲဒီဇာတျ ပွောပုံတှကေ အလုပျ (Work)ရဲ့ ဖိနှိပျမှုတှကေနေ လှနျမွောကျပွီး လူသားဆနျမှုကို ရှာဖှပေေးမယျ့ နညျးပညာနဲ့ သိပ်ပံပညာကို ခဈြမွတျနိုးပါဆိုတဲ့ ဇာတျပွောပုံတှကေို မယုံကွညျတော့တာ။ ဈေးကှကျ အရငျးရှငျဝါဒရဲ့ မဟာဇာတျပွောပုံကနေ လူသားကို လှတျမွောကျ အောငျလုပျတာ၊ လဈဘရယျဒီမိုကရစေီနဲ့ သူ့ရဲ့ အိုငျဒီ ယိုလိုဂြီတှေ အောငျပှဲ ခံသှားပါပွီဆိုတဲ့ ဇာတျပွောပုံတှကေနေ ကငျးလှတျအောငျ ကွိုးစားပေး တာတှပေဲ။
လီယိုတာက ပို့ဈမျောဒနျအတှေးအချေါမှာ ဉာဏျအလငျးပှငျ့ခတျေကနေ ထှကျပျေါလာတဲ့ မဟာ ဇာတျပွောပုံ တှဟော ဆနျ့ကငျြဘကျတှေ ထိပျတိုကျ တှပွေီ့း ပဋိပက်ခတှေ ဖွဈနတေယျ။ အကွောငျးက ဉာဏျအလငျးပှငျ့ခတျေ အတှေးအချေါကနေ ခြီးမွှောကျ ပွီး ထှကျပျေါလာတဲ့ ယုံကွညျခကျြတှေ၊ အလအေ့ကငျြ့ တှဟော သူတို့ရဲ့ အခွခေံ အုတျမွဈကို သူတို့ ပွနျဆနျ့ ကငျြတဲ့ အရာတှေ ဖွဈလာလို့ပဲ။ ဥပမာ သိပ်ပံပညာကို ခဈြမွတျနိုးတဲ့ ယုံကွညျမှုဟာ နယူးကလီယား လကျနကျတှေ ဖှံ့ဖွိုးလာခွငျး၊ လူတှကေို စောငျ့ကွညျ့ ကှတျမတျတဲ့ နညျးပညာတှဖှေံ့ဖွိုးလာခွငျး ကွောငျ့ ပွဿနာတတျလာတယျ။ အဲဒီအခွခေံအုတျမွဈဟာ လှုပျ ခတျလာတယျ။ မာ့ကျဈဝါဒကနပွေောတဲ့ လူမှု ရေးဆိုငျရာ လှတျမွောကျမှုဆိုတဲ့ ဇာတျပွောပုံက လညျး ဆိုဗီယကျပွညျထောငျစုရဲ့ အာဏာရှငျဆနျမှုနဲ့ လူအုပျစုတဈခု ကောငျးစားရေးဝါဒကွောငျ့ ပွိုပကျြလာ တယျ။ ဒါကွောငျ့ လီယိုတာက သူ့ရဲ့ ပို့ဈ မျောဒနျ အခွအေနဆေိုတဲ့ စဈတမျးမှာ Óဏျအလငျး ပှငျ့ခတျေ ကနေ ထုတျလုပျလိုကျတဲ့ မဟာဇာတျပွောပုံတှကေို စဈဆေးကွညျ့ဖို့လိုမယျ။ ဒုတိယတဈခုကတော့ ပို့ဈ မျောဒနျ အသိပညာဟာ လလေ့ာစူးစမျးပုံ၊ ဖှဲ့စညျး တညျဆောကျပုံ၊ သတငျးတှကေို ထုတျလုပျပုံ လမျး ကွောငျး အသဈတဈရပျ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျအောငျ လုပျဖို့ လိုအပျမယျလို့ မွငျလာတယျ။
ဉာဏျအလငျးပှငျ့ခတျေက ထုတျလုပျလိုကျတဲ့ မဟာ ဇာတျပွောတှကေို ဒီဘကျ ပို့ဈမျောဒနျခတျေမှာ မယုံကွညျ တော့ဘူး။ လီယိုတာက incredulity toward meatnarra-tives လို့ ဆိုတယျ။ (ခမျးနားကွီး ကယျြသော အဆိုတှကေို မယုံကွညျတော့ခွငျးလို့လညျး အသုံးရှိတယျ။) ခတျေပွိုငျ လူ့အဖှဲ့အစညျးမှာ အငျစတီ ကြူးရှငျးအတှငျးကနေ ထုတျလုပျလိုကျတဲ့ အသိ ပညာကို မယုံကွညျတော့ဘူး။ အစအဆုံး၊ ဘယျအရာ အတှကျရညျရှယျပွီး ဘာလုပျကွဆိုတဲ့ ခွှငျးခကျြမရှိ တဲ့ ဆငျခွငျမှုပုံစံအပွညျ့အဝ (totality) ဝါ အစအဆုံး ပွညျ့စုံအောငျလုပျပေးထားတဲ့ ဇာတျပွောပုံအပျေါကို မရှာဖှတေော့ဘူး။ ဇာတျလမျးငယျတှေ၊ အဲဒီလို ဇာတျပွောပုံနဲ့ အပှငျ့သဘောဆနျတဲ့ ဇာတျပွောပုံတှေ ထှကျပျေါလာတယျ။ နောကျဆုံး အဆုံးသတျရလဒျကွီး ကို မြှျောလငျ့ခကျြပေးထားတဲ့ ဆငျခွငျမှုပုံစံဝါ ဇာတျ ပွောပုံစံထကျ လူ့အဖှဲ့အစညျးအတှငျး ပဋိပက်ခပေါငျး မြားစှာ၊ အမှနျတရားကို ပုံစံမြိုးစုံနဲ့ ထိတှေ့ အလုပျ လုပျနတေဲ့ ဇာတျပွောငယျလေးတှသောလြှငျ ပိုရှငျသနျ အလုပျလုပျလညျပတျနတောကို တှရေ့တယျလို့ ဆို တယျ။ ဒါကွောငျ့ မဟာဇာတျပွောပုံကွီးတှေ သဆေုံး သှားခဲ့ပွီလို့ လီယိုတာက သုံးတယျ။
Lyotard , – Postmoderncondition .
အသိပညာတော်လှန်ရေး၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နားလည်ရေးနှင့်တန်ပြန်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ဝေါဟာရများ
Angry young man – ဒီဝေါဟာရကို ပထမဆုံးသုံးစွဲခဲ့တဲ့သူက လက်စလီပေါ (Leslie Paul) ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ ၁၉၅၁ ခုနှစ် ကိုယ်တိုင်ရေး အတ္ထုပ္ပတ္တိမှာ ဖော်ပြခဲ့တယ်။ ဒီစကားလုံးဟာ ဗြိတိန်ရဲ့ စာပေမြင်ကွင်းထဲမှာ ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်များ ကာလတွေမှာ မကြာခဏဆိုသလို တွေ့လာ ရတယ်။ ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်ကုန်ခါနီးမှာတော့ ကလီရှေးဖြစ်နေတဲ့ အသုံးတစ်ခုအဖြစ်တောင်မှ မြင်လာကြပြီ။ ဒီစကားလုံး ပေါ်ပြူလာဖြစ် ပြီး ယုံကြည်ကြည်သုံးစွဲလာတာအတွက် တာဝန်ရှိ သူကတော့ ဂျွန်အော့စ်ဘွန်း (John Osborne)ရဲ့ ၁၉၅၇ ခုနှစ်ထုတ် ပြဇာတ် Look Back in Anger ပဲ။ ဒီပြဇာတ်မှာ လမ်းပျောက်ပြီး သူတို့ရဲ့ ခေတ်ကြီးကို မကျေမနပ်၊ မရောင့်မရဲဖြစ်နေတဲ့ လူငယ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကို ဖော်ညွှန်းထားတယ်။ ဒီမျိုးဆက်ဟာ တည်ရှိနေတဲ့ အုတ်မြစ်တွေ၊ ပင်းမရေစီးထဲ ဝင်ရောက်နေရာကျနေတဲ့အရာတွေကို မနှစ်ခြိုက်ကြဘူး။ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆန့်ကျင်ကြတယ်။ သူတို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ လူမှုရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ သဘောထားတွေကို ဆန့်ကျင် တုံ့ပြန်ကြတယ်။ ဟစ်ပိုခရေစီတွေ၊ ရွက်ကြမ်း ရေကြိုလို ဖြစ်နေတဲ့ အနုပညာတွေကို မနှစ်မြို့တော့ ဘူး။ အထူးသဖြင့် သာမန်တန်ဖိုးစံတွေကို စံပုံစံတစ်ရပ် လို အသေစွဲမှတ်ယူပြီး အဲဒီတန်ဖိုးစံတွေအတိုင်း ရေး သားထားတဲ့ အရေးအသားတွေကို ဟစ်ပိုခရက်တွေရဲ့ အရေးအသားတွေ၊ သာမန် ရွက်ကြမ်းရေကြို အရေး အသားတွေအဖြစ် သတ်မှတ်လာကြတယ်။ တစ်နည်း အားဖြင့် ဘူဇွာကျင့်ဝတ်တွေအဖြစ် ခံယူပြီး ပြင်းပြင်း ထန်ထန်ဆန့်ကျင်ကြတာ ဖြစ်တယ်။ အော့စ်ဘွန်းရဲ့ ပြဇာတ်ထဲက ဂျင်ပေါ်တာဟာ ဟီးရိုး ဆန့်ကျင်သူ (anti-hero) ပဲ။ ဒေါသကြီးနေတဲ့ လူငယ်လေးများ ဆိုတာကို ကိုယ်စားပြုနိုင်တဲ့ ဇာတ်ကောင်တစ် ကောင်းပဲ။ အော့စ်ဘွန်းနဲ့ သူ့လက်ရာတွေကနေစပြီး သူနဲ့ခေတ်ပြိုင် မျိုးဆက်လူငယ်တွေကို ကူးစက်သွားတဲ့ ဒေါသကြီးနေတဲ့ လူငယ်လေးများဆိုတာ ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်က အနုပညာလက်ရာ အများစုကို ကိုယ်စားပြု ဖော်ပြတဲ့ စကားလုံးတောင်မှ ဖြစ်လာတယ်။ နောက် ပိုင်း ဒီဝေါဟာရဟာ ဘိ(တ်)မျိုးဆက်ရဲ့ အတွေးအခေါ် တွေထဲမှာလည်း ကိန်းအောင်းသွားတယ်။
ကြည့် – Beat Generation
Bad faith – ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မှားယွင်းစွာ နားလည်မှု။ ယန်းပေါ်ဆာ့တ်ရဲ့ ဖီနိုမန်နိုလိုဂျီဆိုင်ရာ အစောပိုင်း အရေးအသားတွေထဲမှာ အဓိကကျတဲ့ အကြောင်းအရာအဖြစ် တွေ့ရမယ်။ ပြင်သစ်လို Mauvaise foi ဝါ ကိုယ့်ရဲ့ ငါဖြစ်မှုကို မှားယွင်းစွာ နားလည်မှုကို ဆာ့တ်ရဲ့ Being and Nothingness မှာ ပထမဆုံးဖော်ပြထားတယ်။ ပင်ဂွင်းဝေဖန်ရေး သီအိုရီအဘိဓာန်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မှားယွင်းစွာ နားလည်မှုဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လှည့်ဖျားခြင်းနဲ့ ကိုယ့်ငါ့ဖြစ်မှုရဲ့ တကယ့် အရင်းအမြစ်ကို မသိနိုင်ခြင်း (inauthenticity) ပုံသဏ္ဌာန်တစ်ခုဖြစ်ပြီး လူသားရဲ့ လွတ်လပ်မှုကို ငြင်းပယ်ခြင်း (aform of self-deception and inauthenticity andadenial of human free-dom) လို့ ဖွင့်ဆိုတယ်။ ဒီအယူအဆဟာ ဟိုက်ဒေးဂါးနဲ့ ဟူးဆယ်ရဲ့ သိမှုနဲ့ ဖြစ်ရှိမှု (being) အပေါ် အခြေခံတဲ့ အသိတွေကို တုံ့ပြန်ရင်း ထွက်လာတဲ့ အယူအဆပဲ။ ဆာ့တ်အတွက်က လိမ်ညာခြင်းနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မှားယွင်းစွာသိနားလည်ခြင်း နှစ်ခုကြားက အရေးကြီး တဲ့ ကွဲပြားခြားနားချက်ကို ခွဲခြားပေးခဲ့တယ်။ လိမ်ညာ သူဆိုတာက ရှင်းတယ်။ သူ့မှာ အမှန်တရားကို ပိုင်ဆိုင် ထားသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် တခြားသူကို ပြောတဲ့ အခါမှာသာလျှင် သူသိထားတဲ့ အမှန်တရားကို ထုတ် ဖော်ပြောဆိုဖို့ရာ ငြင်းဆန်လိုက်တာ။ ပြီးတော့မှ ထပ်ပြီး သူ့ရဲ့ အမှန်ရယ်လို့ မြင်ထားတဲ့ ကိုယ်ပိုင်အမြင် တစ်ခုကို တိတ်တိတ်ကလေး ငြင်းပယ်လိုက်ပြန်တာ။ လိမ်ညာခြင်းမှာ လိမ်ညာသူရဲ့ သိမှုဟာနှစ်ခုတွဲပုံစံရှိ နေတာ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မှားယွင်းစွာ သိနားလည် ထားသူကတော့ သူ့ကိုယ်တိုင်ကနေတောင်မှာ အမှန် တရားကို မမြင်နိုင်လောက်အောင် မျက်နှာဖုံးတစ်ခုကို စွပ်ထားတာ။ သူကိုယ်သူ ဘာလိုချင်မှန်းလဲ မှန်မှန် ကန်ကန် သိနားမလည်ဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ အရင်းခံအကျဆုံး ငါဖြစ်မှုကို မပိုင်ဆိုင်နိုင်တော့ကာ သူသိသမျှ၊ လုပ်သမျှ ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လှည့်ဖျားနေခြင်းကနေ ထွက် လာတဲ့ အကျိုးဆက်တွေကြီးပဲ။ လိမ်ညာသူလို အမှန် ကို သိနားလည်တာ၊ ပြီးတော့မှ ပြန်ငြင်းတာမျိုး မဟုတ်တော့ဘူး။ သိရဲ့သိမှုမှာကိုယ်က သူပျောက်ဆုံး နေပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လှည့်ဖျားထားခြင်း ပုံစံတစ်မျိုး သာလျှင် ကျန်တော့တယ်။
Beat Movement – ဘိ(တ်) လှုပ်ရှားမှုဆိုတာ ကဗျာ နဲ့ စာပေတစ်ခုတည်း မဟုတ်ဘူး။ ယဉ်ကျေးမှု တစ်ခုအနေနဲ့ ပါ အမေရိကန် လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ နေ့စဉ် ဘဝထဲ ပျံ့နှံ့ စိမ့်ဝင်ခဲ့တဲ့ အတွေးအခေါ်၊ ဘဝနေထိုင်မှု ပုံစံတွေပဲ။ ဘိ(တ်)တွေက သာမန်ကြည့်လိုက်ရင် စစ်ပြီး ခေတ် စစ်အေးတိုက်ပွဲအတွင်း နဝေတိမ်တောင် ဖြစ် နေတဲ့ အမေရိကန် လူ့အဖွဲ့ အစည်းရဲ့ အခြေအနေ ကို မကျေမနပ်ဖြစ်နေတာလို့ တွေးနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းလေ့လာကြည့်ရင် ဘိ(တ်) တွေဟာ သူတို့ရဲ့ ကျေနပ်ဖွယ်ရာမကောင်းတဲ့ အခြေအနေ တစ်ရပ်ကို အနုပညာအရ ဘယ်လို တုံ့ပြန်သလဲဆိုတာ တင် မကဘူး၊ သူတို့ရဲ့ ဘဝနေထိုင်မှု ပုံစံတစ်ခု လုံးနဲ့ပါ တွန်းတိုက် ရွေ့လျားဖို့ ကြိုးစားတယ်။ ဒါကြောင့် ဘိ(တ်)တွေအတွက် ကဗျာ၊ ဝတ္ထုဆိုတာ ကဗျာ၊ ဝတ္ထု သက်သက် ဖြစ်မနေဘူး။ ဘိ(တ်)တွေအတွက် သူတို့ရဲ့ အနုပညာဆိုတာ သူတို့ရဲ့ဘဝပဲ။ ဘိ(တ်)တွေက နေ့စဉ် ဘဝနဲ့ကင်းကွာပြီး ဘယ်တော့မှ အနုပညာကို မတွေးခေါ်ဘူး။ သူတို့က သူတို့ လက်ရှိ ပစ္စုပ္ပန်ဘဝ အတွင်း နေ့စဉ် မြင်တွေ့နေရတဲ့ အရာတွေ၊ အဲဒီနေ့စဉ် မြင်တွေ့နေရတဲ့ အရာတွေအပေါ် လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင် ထားတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု၊ စာပေ စတာတွေကို တွန်းကန်ဖို့ ကြိုးစားတာပဲ။ သူ့တို့ရဲ့ လက်ရှိ လူ့အဖွဲ့အစည်း အတွက် အရေးကြီးဆုံးက ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာပဲတွေး တယ်။ ဘိ(တ်)တွေက လွှမ်းမိုးကြီးစိုးဆဲ ယဉ်ကျေးမှု တန်ဖိုးစံတွေကနေ သွေဖယ်ဖို့၊ ဆန့်ကျင်ဖို့ လုပ်ကြတဲ့ နေရာမှာတော့ ပို့စ်မော်ဒန်ဝါဒီတွေရဲ့ ရှေ့တော်ပြေးပဲ။ ဘိ(တ်)တွေက သူတို့ရဲ့ ဘဝတစ်ခုလုံးစာနဲ့တောင်မှ လွှမ်းမိုးကြီးစိုးဆဲ တန်ဖိုးစံကနေ ကင်းလွှတ်မယ့် သူတို့ ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးစံ၊ ကိုယ်ပိုင်ဘဝနေထိုင်ပုံတွေကို ရှာဖွေတာ။ ဒါကြောင့် ဘိ(တ်)တွေဟာ ပင်မရေစီး ယဉ်ကျေးမှုတွေကနေ အမြဲသွေဖယ်ခဲ့ကြတယ်။ ဘိ(တ်)တွေက ယဉ်ကျေးမှုအခွဲတွေ ဝါ သူတို့ဘာသာ သူတို့ ဖန်တီးတည်ဆောက်ထားတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုပုံစံ (subculture) တွေကို ဖန်တီးတည် ဆောက်နိုင်တယ်။ ဘိ(တ်) ယဉ်ကျေးမှု ဟန်၊ ဘိ(တ်) စတိုင်တွေဟာ တစ်ခါတစ်ခါ ပင်မရေစီးထဲကိုတောင်မှ ရောယှက် သွားတယ်။ ဘိ(တ် ) ယဉ်ကျေးမှုဟာ ဘီတဲလ်၊ ဘော့ ဒလန်တို့အထိတောင်မှ နယ်နိမိတ် ရေးဆွဲထားတယ်။
Counterculture – ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်များမှာ ဖွံ့ဖြိုး လာတဲ့ ဝေါဟာရတစ်ခုဖြစ်တယ်။ လူငယ်ယဉ် ကျေးမှု၊ ကျောင်းသားတွေရဲ့ သီးသန့် ယဉ်ကျေးမှုခွဲနဲ့ အထူးသဖြင့် ဟစ်ပီယဉ်ကျေးမှုတွေကို နားလည်လာ အောင်လုပ်တဲ့ အယူ အဆတစ်ရပ်လည်းဖြစ်တယ်။ တန်ပြန်ယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့ ဒီဝေါဟာ သုံးစွဲပုံနှစ်မျိုးရှိ တယ်လို့ Frank Musgrove (1974) က သူ့ရဲ့ Ectasy and Holiness, Counter Culture and the Open Society မှာ ဖော်ပြတယ်။ တစ်ခုက တန်ပြန် ယဉ်ကျေး မှုဟာ ပါဝါကို လှုပ်ရှားပြီး ရွေ့လျားနေတဲ့ ပါဝါမျိုး အဖြစ် လုပ်ဆောင်တယ်။ ဆိုလိုတာ လွှမ်းမိုးကြီးစိုးဆဲ ယဉ်ကျေးမှုကို ဆန့်ကျင်တဲ့ အတွေးအခေါ်၊ ယုံကြည် မှုနဲ့ တန်ဖိုးစံတွေကို ယူဆောင်ပေးတာ။ ဒုတိယ တစ်ခုကတော့ တန်ပြန်ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာ ရုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာထက် စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာကို တန်ဖိုးထားတာ၊ အရှက်အကြောက်နဲ့ ထိန်းချုပ်နေခြင်းထက် လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ခံစားမှု၊ လောကီစည်းစိမ် ခံစားမှုကို ဦးစားပေး တယ်။ အာဂတိလိုက်စားမှုထက် လက်ခံပေး၊ သည်း ညဉ်းခံပေး (tolerence) တယ်။
တန်ပြန်ယဉ်ကျေးမှုဆိုရင် အဓိကအားဖြင့် ပင်မ ရေစီး လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲ အဖြောင့်အတိုင်းနေဖို့ထက် ပင်မရေစီးကနေ ခွဲထွက်တဲ့ပြီး နေထိုင်တဲ့ အုပ်စုတွေကို လည်း ရည်ညွှန်းတယ်။ တန်ပြန်ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာ အသစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ လူမှုရေးအလေ့အကျင့်တွေကို ဆိုလိုတယ်။ တန်ပြန်ယဉ်ကျေးမှုလုပ်တယ် ဆိုတာ ကလည်း လူမှုအလေ့အကျင့် အသစ်တွေ ဖြစ်ထွန်း လာအောင်ကြိုးစားခြင်းပဲ။ မူးယစ်ဆေးသုံးတာ၊ လိင် ကိစ္စလွတ်လပ်တာ၊ ပညာရေးကို ရှိပြီးသားပုံစံကနေ တိုက်ရိုက်မချဉ်းကပ်တာမျိုးတွေပဲ။ အဲဒီလို တန်ပြန် ယဉ်ကျေးမှုတွေကို အထောက်အပံ့ပေးတဲ့ အင်စတီ ကျူးရှင်တွေက ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဖွဲ့စည်းတည် ထောင် နေထိုင်တဲ့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွေ၊ ပင်မရေစီး ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ သတင်းစာတွေ၊ မဂ္ဂဇင်းတွေ၊ လွတ် လပ်တဲ့ ကျောင်းတွေ၊ မြေအောက်ပွဲတော်တွေ (un-derground festivals) ကို ခေါ်တယ်။ ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ် များမှာ တန်ပြန်ယဉ်ကျေးမှု ပုံစံတွေ အားကောင်းပြီး နောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်း လျော့ကျသွားတယ်ဆိုပေ မယ့် သူ့ရဲ့ အတွေးအခေါ်ပိုင်းနဲ့ သင်္ကေတဆိုင်ရာ တွေကတော့ ရှိနေဆဲပဲ ဖြစ်တယ်။
Critique – ဒီစကားလုံးဟာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စကားထဲကို ၁၈ ရာစုအစောပိုင်းလောက်က ပြင်သစ် ဘာသာ စကားကနေ ရောက်ရှိလာတဲ့ စကားလုံး ဖြစ်တယ်။ ခရစ် ဘောဒစ်ကတော့ သူ့ရဲ့ အောက်စဖို့ဒ် စာပေဝေါဟာရ အဘိဓာန်မှာ ]စာပေလက်ရာတစ်ခုကို နှိုင်းနှိုင်းချိန်ချိန် ချဉ်းကပ်လေ့လာမှုပုံစံ။ အများအားဖြင့် အက်ဆေး ဒါမှမဟုတ် ရီဗြူးပုံစံမျိုးအတွက် သုံးလေ့ရှိ တဲ့စကားလုံး}လို့ ဖွင့်ဆိုထားတယ်။ ဒီစကားလုံးဟာ အစောပိုင်းမှာ စာပေလက်ရာတွေကို သရုပ်ဖော်တာ၊ စီရင်ချက်ချတာအတွက် သုံးတယ်။ ဒါပေမယ့် ၁၉ ရာစုလောက်မှာ ပြန်ပြီး အဓိပ္ပာယ်အသစ်နဲ့ ပေါ်လာ တယ်။ ၁၈ ရာစုကုန်ခါနီးလောက်မှာ ဂျာမန်ဒဿန ပညာရှင် အီမန်နူရာယ်ကန့်ရဲ့ အသုံးတွေကြောင့် သူ့ကို ဘာသာပြန် ပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားထဲရောက် လာတယ်။ ဒီပြန်ရေပန်းစားလာတဲ့ Critique ဆိုတဲ့ အသုံးဟာ မြန်မာဘာသာစကားအနက်မှာ သုံးတဲ့ ဝေဖန်ရေး Crticism ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ မတူတော့ဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း ခွဲပြီးသုံးတယ်။ Criticism က သူ ဝေဖန်မယ့်အရာဟာ ဘယ်လို လည်ပတ်အလုပ်လုပ် နေသလဲဆိုတဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံကို ရှင်းပြတယ်။ နောက် စီရင်ချက်ချတာ၊ အဆိုးအပြစ်ရှာတာ စသဖြင့် သူ့ သမိုင်းကြောင်းနဲ့ သူလာတဲ့ ဝေဖန်ရှုမြင်ပုံ နည်းနာ အရပ်ရပ်ကို စုပေါင်းခေါ်တာ။ Critique ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရက သူရှင်းပြ ထုတ်ဖော်ပြချင်တဲ့ နှိုင်းနှိုင်း ချိန်ချိန်ချဉ်းကပ်တဲ့အပိုင်းကို ဆိုလိုတယ်။ တစ်နည်း အားဖြင့် စူးစမ်းရှာဖွေခြင်းပဲ။ ဝေဖန်တယ်လို့ ဆိုရင် တောင်မှ သူပြောချင်တဲ့ အဆိုတစ်ခုကို တင်ပြတော့ မယ့် ပုံစံမျိုးသာလျှင်ဖြစ်တယ်။ ဥပမာ ကန့်ရဲ့ Critique of Pure Reason (1787) သုံးတဲ့ Critique ဆိုတာ အသိပညာပုံသဏ္ဌာန်အရင်းအမြစ်ကို ရှာဖွေ ခြင်းပုံစံနဲ့သုံးတယ်။ စူးစမ်းရှာဖွေခြင်းဆိုတဲ့အနက် ထွက်တယ်။ ပြီးတော့ သူက လေ့လာစူးစမ်းတဲ့နေရာ မှာလည်း ချင့်ချင့်ချိန်ချိန်နဲ့ အကြောင်းအကျိုး ထုတ် ပြတယ်။ ဥပမာ ရုပ်ရှင်တစ်ခုရဲ့ လူမျိုးရေးဝါဒအကြောင်း စူးစမ်းပြောဆိုတော့မယ်ဆိုရင် (critique of the racism ofafilm) ဒီရုပ်ရှင်ဟာ လူမျိုးရေးခွဲခြားတယ် ဆိုပြီး ရုတ်ချည်းမပြောဘူး။ ဘာကြောင့် လူမျိုးရေး ခွဲခြားသလဲ၊ ဘယ်လို အဓိပ္ပာယ်မျိုးတွေက လူမျိုးရေး ခွဲခြားသလို ဖြစ်နေသလဲဆိုတာကို အကြောင်းနဲ့ အကျိုးနဲ့ ပြောတယ်။ မာ့က်စ်က သူ့ရဲ့ အရင်းကျမ်း Capital ရဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို A Crtitique of Political Economy လို့ ဆိုရင် သူဆိုလိုချင်တာက နိုင်ငံရေး ဘောဂဗေဒရဲ့ အရင်းအမြစ်ဟာ အကန့်အသတ်တွေ ရှိနေကြောင်းကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ရာအတွက် လေ့လာစူးစမ်းတာပဲ။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ Critque ဆိုတာ အရင်းရှင်စနစ် အလုပ်လုပ်ပုံကို ကောင်းကောင်း ရှင်းပြပေးနိုင်ဖို့ရာ လေ့လာစူးစမ်းနေခြင်းဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ သုံးတယ်။ မာ့က်စ်ရဲ့ အရေး အသားတွေ ထဲမှာတွေ့ရတဲ့ Critiqueu က အိုင်ဒီယိုလိုဂျီကို စေ့စေ့ စပ်စပ် စိတ်ဝင်တစားဖော်ထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့ အနက်မျိုး ရှိတယ်။ Critique ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က လက်ရာထဲက အိုင်ဒီယိုလိုဂျီကို စူးစမ်းဖော်ထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့ သဘော ပဲ။
အဒေါနိုး (Adorno)atranscendent critique နဲ့ an immanent critique ဆိုပြီး ခွဲခြားပြသေးတယ်။ A transcendent critique က သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်း နိယာမတွေကိုတည်ပြီး၊ အဲဒီအရာကို အသုံးချပြီး သီအိုရီတစ်ခုကို အပြင်ကနေ ဝေဖန်တယ်။ An immanent critique ကတော့ အဲဒီ ဝေဖန်မယ့် သီအိုရီ အတွင်းပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ ပဋိပက္ခတွေကို ရှာဖွေဖော် ထုတ်ပြီး အဲဒီသီအိုရီရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဝေါဟာရတွေနဲ့ သူ့ကို ပြန်ဝေဖန်တယ်။
Death of the grand narratives – ရန်းဖရန်ဆွာ လီယိုတာက သူ့ရဲ့ The Postmodern Condition (1979) စာအုပ်မှာ ရေးသားထုတ် ဖော်ထားတဲ့ အတွေး အခေါ် တစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒီလက်ရာဟာ အဓိကအား ဖြင့် အသိပညာကို ဘယ်လို ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက် ထားသလဲ၊ ဘယ်လို ထုတ်လုပ်လိုက်သလဲဆိုတဲ့ လမ်း ကြောင်းကို အဓိက စိတ်ဝင်တစား ရှာဖွေစူးစမ်းမှု တွေနဲ့ ပတ်သတ်တယ်။ လီယိုတာ က ဥာဏ်အလင်း ပွင့်ခေတ်ရဲ့ မော်ဒန်ဖြစ်မှု (modernity) မှု အသိပညာ ဆိုတာ မဟာဇာတ်ပြောပုံတွေထဲမှာ တည်ဆောက်ခံ ထားရတယ်လို့မြင်တယ်။ မဟာဇာတ်ပြောပုံတွေ ဆိုတာ သီးသန့် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တစ်ခုဆီကို မူတည်ပြီး အိုင်ဒီယိုလိုဂျီအရ မောင်းနှင်နေတဲ့ စကား လုံးဖြစ်တယ်။ တီးလို့ ( Telos ) လို့ခေါ်တဲ့ နောက်ဆုံး အဆုံးသတ်မှာ အမှန်တရားတစ်ခုကို ထုတ်လုပ်လိုက် တဲ့ အမြင်၊ ဝါ အခြေခံ အုတ်မြစ်တစ်ခုအပေါ် တည် ဆောက်ထားတဲ့ နိယာမအပေါ် အခြေခံပြီး တည် ဆောက်ထားတဲ့ ဇာတ်ပြောပုံစံမျိုးကို ခေါ်တယ်။ မော်ဒန်ဖြစ်မှုဟာ အဲဒီလို တည်ဆောက်ထားတဲ့ မဟာ ဇာတ်ပြောပုံ (grand narratives) ထဲမှာ အသိပညာ ကို ထုတ်လုပ်နေတဲ့ ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်။ အသိပညာ ဆိုတာ သန့်စင်တဲ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု မဟုတ်ဘူး။ ယုံကြည်လာအောင် ပြုလုပ်ခံထားရတဲ့ အရာ၊ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ လူမှုရေးကနေ မောင်းနှင်နေတဲ့ အရာဖြစ်ပြီး သီးသန့် အိုင်ဒီယိုလိုဂျီဆိုင်ရာ အမြင် တစ်ရပ်ကို ထုတ်ဖော်ပြဖို့ရာအတွက် လိုအင်ဆန္ဒ တစ်စုံတစ်ရာ အတွင်းက မောင်းနှင်နေတဲ့ အရာဖြစ် တယ်။ စစ်မှန်တဲ့ အသိပညာဆိုတာ မဟာဇာတ် ပြောပုံထဲကနေ မောင်နှင်နေတဲ့ အိုင်ဒီယိုလိုဂျီတွေ၊ လိုအင်ဆန္ဒတွေကနေ အသိအမှတ်ပြုပေးခံထားရတဲ့ အရာကိုမှ စစ်မှန်တဲ့ အသိပညာလို့ မှတ်ယူထားတဲ့ ပုံစံဖြစ်တယ်။
နောက်ထပ်စကားလုံးတစ်ခုနဲ့ ပြောမယ်ဆိုရင် မဟာဇာတ်ပြောပုံ ပစ္စုပ္ပန်ကာလတရားအတွင်း တည်ရှိပြီး လည်ပတ်နေတဲ့ ယုံကြည်မှုစနစ် (a circular system of belief) တစ်ခုပဲ။ ပစ္စုပ္ပန်ကာလ တရားအတွင်းမှာ လက်ခံထားပြီး လည်ပတ်နေတဲ့ ယုံ ကြည်မှုစနစ်ပဲ။ လီယိုတာက ဥာဏ်အလင်းပွင့် ခေတ်ကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့ မဟာ ဇာတ်ပြောပုံတွေထဲမှာ အလွှမ်းမိုး ဆုံး မဟာဇာတ်ပြောပုံနှစ်ခုမှာ တစ်ခုက မာ့က်စ်ဝါဒဇာတ်ပြောပုံပဲ။ လူမှုရေးဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု တွေက ထွက်လာတဲ့ ကျွန်ပြုခြင်း၊ သူတစ်ထူးအောက်မှာ အလုပ်လုပ်ရ တဲ့ ပုံစံကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ရာ ကြိုးစားတဲ့ ဇာတ်ပြောပုံ။ ဒုယတိ တစ်ခုကတော့ ဟေဂယ် ဇာတ်ပြော ပုံ (The Hegelian narrative) တစ်ခုပဲ။ ဘာသာရေးကနေ ကင်း လွတ်ပြီး စစ်မှန်တဲ့ အသိပညာကို ရှာဖွေတဲ့ ဇာတ်ပြောပုံတစ်ခုပဲ။ တခြားသော သီအိုရီ ပညာရှင်တွေ ရဲ့ ဇာတ်ပြောပုံတွေ လည်းရှိသေးတယ် အဲဒီဇာတ် ပြောပုံတွေက အလုပ် (Work)ရဲ့ ဖိနှိပ်မှုတွေကနေ လွန်မြောက်ပြီး လူသားဆန်မှုကို ရှာဖွေပေးမယ့် နည်းပညာနဲ့ သိပ္ပံပညာကို ချစ်မြတ်နိုးပါဆိုတဲ့ ဇာတ်ပြောပုံတွေကို မယုံကြည်တော့တာ။ ဈေးကွက် အရင်းရှင်ဝါဒရဲ့ မဟာဇာတ်ပြောပုံကနေ လူသားကို လွတ်မြောက် အောင်လုပ်တာ၊ လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီနဲ့ သူ့ရဲ့ အိုင်ဒီ ယိုလိုဂျီတွေ အောင်ပွဲ ခံသွားပါပြီဆိုတဲ့ ဇာတ်ပြောပုံတွေကနေ ကင်းလွတ်အောင် ကြိုးစားပေး တာတွေပဲ။
လီယိုတာက ပို့စ်မော်ဒန်အတွေးအခေါ်မှာ ဥာဏ်အလင်းပွင့်ခေတ်ကနေ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ မဟာ ဇာတ်ပြောပုံတွေဟာ ဆန့်ကျင်ဘက်တွေ ထိပ်တိုက် တွေ့ပြီး ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်နေတယ်။ အကြောင်းက ဥာဏ်အလင်းပွင့်ခေတ် အတွေးအခေါ်ကနေ ချီးမြှောက် ပြီး ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ယုံကြည်ချက်တွေ၊ အလေ့အကျင့် တွေဟာ သူတို့ရဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ်ကို သူတို့ ပြန်ဆန့် ကျင်တဲ့ အရာတွေ ဖြစ်လာလို့ပဲ။ ဥပမာ သိပ္ပံပညာကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ ယုံကြည်မှုဟာ နယူးကလီယား လက်နက်တွေ ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်း၊ လူတွေကို စောင့်ကြည့် ကွတ်မတ်တဲ့ နည်းပညာတွေဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းကြောင့် ပြဿနာတတ်လာတယ်။ အဲဒီအခြေခံအုတ်မြစ်ဟာ လှုပ် ခတ်လာတယ်။ မာ့က်စ်ဝါဒကနေပြောတဲ့ လူမှု ရေးဆိုင်ရာ လွတ်မြောက်မှုဆိုတဲ့ ဇာတ်ပြောပုံက လည်း ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုရဲ့ အာဏာရှင်ဆန်မှုနဲ့ လူအုပ်စုတစ်ခု ကောင်းစားရေးဝါဒကြောင့် ပြိုပျက်လာ တယ်။ ဒါကြောင့် လီယိုတာက သူ့ရဲ့ ပို့စ် မော်ဒန် အခြေအနေဆိုတဲ့ စစ်တမ်းမှာ Óဏ်အလင်း ပွင့်ခေတ် ကနေ ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ မဟာဇာတ်ပြောပုံတွေကို စစ်ဆေးကြည့်ဖို့လိုမယ်။ ဒုတိယတစ်ခုကတော့ ပို့စ် မော်ဒန် အသိပညာဟာ လေ့လာစူးစမ်းပုံ၊ ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်ပုံ၊ သတင်းတွေကို ထုတ်လုပ်ပုံ လမ်း ကြောင်း အသစ်တစ်ရပ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် လုပ်ဖို့ လိုအပ်မယ်လို့ မြင်လာတယ်။
ဥာဏ်အလင်းပွင့်ခေတ်က ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ မဟာ ဇာတ်ပြောတွေကို ဒီဘက် ပို့စ်မော်ဒန်ခေတ်မှာ မယုံကြည်တော့ဘူး။ လီယိုတာက incredulity toward meatnarra-tives လို့ ဆိုတယ်။ (ခမ်းနားကြီး ကျယ်သော အဆိုတွေကို မယုံကြည်တော့ခြင်းလို့လည်း အသုံးရှိတယ်။) ခေတ်ပြိုင် လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ အင်စတီ ကျူးရှင်းအတွင်းကနေ ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ အသိ ပညာကို မယုံကြည်တော့ဘူး။ အစအဆုံး၊ ဘယ်အရာ အတွက်ရည်ရွယ်ပြီး ဘာလုပ်ကြဆိုတဲ့ ခြွင်းချက်မရှိ တဲ့ ဆင်ခြင်မှုပုံစံအပြည့်အဝ (totality) ဝါ အစအဆုံး ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပေးထားတဲ့ ဇာတ်ပြောပုံအပေါ်ကို မရှာဖွေတော့ဘူး။ ဇာတ်လမ်းငယ်တွေ၊ အဲဒီလို ဇာတ်ပြောပုံနဲ့ အပွင့်သဘောဆန်တဲ့ ဇာတ်ပြောပုံတွေ ထွက်ပေါ်လာတယ်။ နောက်ဆုံး အဆုံးသတ်ရလဒ်ကြီး ကို မျှော်လင့်ချက်ပေးထားတဲ့ ဆင်ခြင်မှုပုံစံဝါ ဇာတ် ပြောပုံစံထက် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ပဋိပက္ခပေါင်း များစွာ၊ အမှန်တရားကို ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ ထိတွေ့ အလုပ် လုပ်နေတဲ့ ဇာတ်ပြောငယ်လေးတွေသာလျှင် ပိုရှင်သန် အလုပ်လုပ်လည်ပတ်နေတာကို တွေ့ရတယ်လို့ ဆို တယ်။ ဒါကြောင့် မဟာဇာတ်ပြောပုံကြီးတွေ သေဆုံး သွားခဲ့ပြီလို့ လီယိုတာက သုံးတယ်။
မ င်းခ က် ရဲ